About Us - NEH warshadaha & Ganacsiga Co., Ltd.
ISPO Munich Jan.26 in Jan.29, 2020, soo dhawoow our waab C6.431-6
Gacan ku Hoop
Yoga Blocks & suumanka
Sharabaaddo Yoga, Dambiisha & Kuwo kale
LAYLI & JIRDHISKA
Duugista isaguu ku eekoow
Hordhac kooban oo ku saabsan Kooxda Our
Waxaan eegi our R & D kooxda sida awood noo soo koraya, waxaan mar walba ku riday 10% faa'iido net galay R & D, anaguna waxaan raadineynaa suuqa iyo falanqeynta arrimuhu suuqa, taas oo abuuraa badan oo fikrad, in la soo qaato in macaamiisha xirfadeed our xiriiraan hareeraha qaar ka mid ah aduunka. fikrad la isku raacay qaar ka mid noqon doonaan sawir design, mar kale iyo mar xiriiraan ......, ugu dambeyntii sawirka ahbaa by our R & D kooxda, soo socda waa in la sameeyo tijaabada kama dambays ah, Markaas aan tag xulo- "Warshadaha" ee soo socda
Waxaan leenahay warshadood oo noo gaar ah oo soo saaridda Hula Hoop, Qoorta iyo taageero Back Products, Acupressure Products iyo fikirka Products in Ningbo, Markii aan amar ka soo macaamiisheena helay, Our qof iibka reconfirm doonaa dhammaan faahfaahinta la macaamiisheena. Ka dib markii in, Warshado ka dhigi doonaa warshad baarka Pre-Production bilaabi doonaa wax soo saarka mass marka shaybaarka PP waxaa xaqiijiyay. Warshadda sameeyo alaabta waa sida nidaamka maamulka ISO9001 tayada 2008, Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tayada our, Tag tallaabada xigta - "tayada"
Our tayada qaybsanaanteena nidaamka 3 gacanta parts- wax tayo (inspection ka hor tegaya our bakhaarka wax-soo-saarka ama ka hor), tayada inta lagu guda jiro soo saarka mass iyo kormeerka tayada wax soo saarka ka dib. control Our tayo leh waa salka ku ISO9001 habka maareynta tayo leh, kormeerka Sanbal ah sidii loo Aql (Yaree Tayada Aqbalaada) 2.5 heerarka. Our QC ka dhigi doonaa warbixinta kormeerka Si kasta. Ka dib markii macaamiisha hubinta warbixinta kormeerka iyo xaqiijiyay, Waxaan ka soo markab doonaan alaabta.
Marketing iyo Sales
marketing ugu fiican ee waa in la helo baahida dhabta ah iyo si aad u hesho wax soo saarka caan ah suuqa ugu macaamiisheena, kooxda Our suuq-geynta iyo R & D kooxda waxaa mar kasta wada shaqaynaya si ay u sameeyaan wax soo saarka cusub si loo daboolo macaamiisha final 'macaamiisha final baahida. Our qof iibka had iyo jeer raaci doonaan fikradda cusub iyo alaabta kooxda suuq-geynta iyo R & D kooxda oo ku hardiyi waxyaabaha cusub iyo wax soo saarka oo caan ah si ay macaamiisha our, Waxaan diiradda xirfadlaydu, iyo adeega ruux, noocan oo kale ah sida aynu u isticmaalaya afka hooyo si ay ugu adeegaan macaamiisheena . Waxaan u malaynayaa in xiriir wanaagsan uu yahay guusha qeybtii.
Ka dib markii adeeg
Waxaan eegi bixinta kasta laga bilaabo amarka cusub. Ka dib markii alaabtii doonnida soo baxay, waxaan diyaarin doonaa waraaqaha oo dhan ee macaamiisha in ay qaado alaabta si habsami leh, caawinta macaamiisha sida loo soo qaado alaabta haddii loo baahdo. Waxaan soo diri doonaa "foomka lagu qanci karo" si ay macaamiisha dhowr maalmood ka dib. Waxaan eegi "Macaamiisha ugu horeysay, ruuxa Contract iyo credit ugu horeysay" sida mabaadi'da salka ku saabsan sinnaanta Mutual, ixtiraam Mutual iyo faa'iidada.
hordhac kooban oo magac
brand "NEH" waxa la dhisay 2005, Mabda'a si ay u dhisaan brand this "NEH" waa saldhigga on Dabiiciga ah (Organic), Eco saaxiibtinimo iyo Caafimaadka. brand "NEH" wuxuu qaadanayaa xarafka ugu horeeya ka Dabiiciga ah, Eco saaxiibtinimo iyo Caafimaadka. Waxaan uga sooco, si loo hindiso iyo in dabiiciga ah, Eco Friendly iyo waxyaabaha caafimaadka u samaysaa macaamiisheena.
brand The "SCMO" sidoo kale waa magaca shirkadda, Waxaa loogu talagalay sida ay falsafada Shiinaha ee "Aragtida shan xubno" iyo "Fengshui", SCMO ee Chinese waa "Xun Mu", Erayga "Xun" ee Chinese waa in ay u tegi kartaa meel kasta oo dunida ku shaqada ah, oo our mission waa in la caawiyo qof ka badan oo caafimaad, erayga "Mu" ee Chinese waa in aan waa in la shaqeeya adag iyo knowhow maalin kasta, Sidaas SCMO (Xunmu) waa in aan waa in la shaqeeya adag iyo knowhow maalin kasta si jidhku kasta oo dheeraad ah oo ku caawin caafimaad.
Iyadoo horumarinta technology sayniska, dunida noqday dheeraad ah midabo duurka wax badan ka hor, wax The beddelay oo dhinacyo badan ah, Inta badan dadka ayaa helay wax badan oo ka mid ah faa'iidooyinka ka dhanka jirka ah, si kastaba ha ahaatee, Waa dheelitir la'aanta u dhaxaysa dhinaca jirka iyo maskaxda ku & Naf dhinac. brand The BESELF la dhisay si loo hindiso iyo horumarinta waxyaabaha la xiriira in ay gargaar dadka si aad u hesho dheelitirka u dhexeeya dhinaca jirka iyo maskaxda ku & dhinac naftiisa.
Sixir BACK TAAGEERADA
Iyadoo horumarinta IT ah, Kuwaasoo bedelay inta badan dhaqan ka shaqeeya dadka si ay u muddo dheer time.A dheer fadhigii keentaa dhibaato bacda for our dhabarta fadhiisan, Waxaan inta badan dareemaan dhabar xanuun yar yahay iyo qoorta xanuun, xanuun Tani chronic hanjabo our nolosha fiican, Waxaan uga sooco, si ay gargaar dadka si loo hagaajiyo xaaladaha ay, Taasi waxay ahayd sababta brand "taageerada dib sixir" ee la dhisay 2011.Now brand ah "taageero dib sixir" waxaa ka diiwaan gashan Shiinaha, Maraykanka iyo Midowga Yurub
Fikradda ah "saaxiibtinimo Eco" waa mabaadi'da our si aad ugu qorshayso waxyaabaha iyo in la sameeyo badeecada iyo in la dhiso guutooyin our. In 2010, waxaa jiray kiniinka cunto lahaa dhibaato halis ah. Waan dareensanahay inay jiraan fursad aad u wanaagsan inaynu ku hardiyi our hoop hula fullaaci kara, Dadka had iyo jeer ku yidhi "Miisaan dhac, Isticmaalka hoop hula", waxaan kaliya ka heshay wax ka, Sidaas daraaddeed waxaan dhisay brand ah "Miisaanka Hoop" for hoop hula our .Haddaba hoop miisaanka waxaa ka diiwaan gashan Shiinaha, Maraykanka iyo Midowga Yurub
hordhac kooban oo ka mid ah kooxda
Research & Development Waxaan eegi our R & D kooxda sida awood noo soo koraya, Waxaan mar walba ku riday 10% faa'iido net galay R & D, Waxaan eegaynaa suuqa iyo falanqeynta arrimuhu suuqa, Waa kuwee abuuraa badan oo fikrad, Waxaan kor u qaado qaar ka mid ah si ay macaamiisha xirfadeed our isgaadhsiin agagaarka world.Some lagu heshiiyey fikrad noqon doonaan sawir design, mar kale iyo mar xiriiraan ......, ugu dambeyntii sawirka ahbaa by our R & D kooxda, soo socda waa in la sameeyo tijaabada kama dambays ah, Markaas aan tag xulo- soo socda "Warshadaha"
Waxaan leenahay warshadood oo noo gaar ah oo soo saaridda Hula Hoop, Qoorta iyo Back Products taageero, Acupressure Products iyo fikirka Products in Ningbo, Markii aan amar ka soo macaamiisheena helay, Our qof iibka reconfirm doonaa dhammaan faahfaahinta la macaamiisheena, Ka dib markii in, Warshado doono Pre-ka dhigi Production baarka warshad ku bilaaban doono wax soo saarka mass marka shaybaarka PP waxaa xaqiijiyay. Warshadda sameeyo alaabta waa sida nidaamka maamulka ISO9001 tayada 2008, Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tayada our, Tag tallaabada xigta - "tayada"
FAQ ee shirkadda
Maxay yihiin waxyaabaha & suuqyada waaweyn?
waxyaabaha ugu muhiimsan yihiin hoop hula, derin acupressure, qalabka daaweynta lumbar oo barkin u fiirsadaa. Waxaan leenahay waayo-aragnimo 10 sano ee soo saarta iyo dhoofinta wax soo saarka, kuwaas oo. alaabta iyo adeegyada lagu kalsoon tahay by macaamiisha ka Europe, North America, Oceania iyo South Korea, kuwaas oo inta badan yihiin maamulayaasha supermarket, purchasers xirfadle in taam ahaanshihiisa iyo caafimaadka berrinka, iyo dukaanlayda Amazon.
Waa maxay tirada ugu yar ee aan ka dalban karaa?
MOQ ku xiran tahay waxa alaabta aad xiiseynaya Sida caadiga ah., 50-100pcs / per midabka alaabooyinka our ugu weyn waa shaqaynayaa, haddii aan aad si faahfaahsan ahaanayta waa mid adag. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan u taageero macaamiisha our waayo labada dhinac.
Waa maxay nooca baakada aad ku bixisaan & waxaan astaysto karaa?
Baakadaha Standard waa magac edbinta + + buuga sanduuqa midabka (ama sanduuqa mail) + sanduuqa kartoonka. Waxa ay noqon kartaa kale oo ku salaysan dalabka aad. Our naqshadeeye xirfadeed bixin doonaa fursado badan iyo fikrado cusub oo ku saabsan baakooyinka.
waxaad siin kartaa buugga ka mid ah waxyaabaha oo dhan?
Haa. Waxaan leenahay haayaha oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee si gooni gooni ah. Waxaan ku faraxsan nahay in aad soo diri haayaha ee PDF ama sawir format dhex e-mail ama apps bulshada.
Ha ku siin diiwaanka of sida loo isticmaalo wax soo saarka ah?
Haa. Waxaan ku siin karaan buuga instrucion ah macluumaad ah ee ay u shaqeeyaan, isticmaalka, iyo u sameeyaan iyo SAAMEYN alaabooyinka oo dhammuba aannu marno.
waxaan hal ama qaar ka mid ah midabo kala kartoo dalban karaa?
Haa. Waxaan leenahay midabyada qaar ka mid ah in la doortay iyo ku tusi doona fursadaha. Waxa kale oo aanu beddeli karaa midabka cusub kuu. Just noo sheeg tirada Pantone ama noo soo diri muunad midabka ah.
Waa maxay qiimaha saamiga?
Waxaan ku faraxsan nahay si ay u bixiyaan hal muunad joogto ah oo lacag la'aan ah aad loogu talagalay halka waa in aad bixiso ee xamuulka iyo baarka dheeraad ah. lacag dheeraad ah oo la xisaabin doono muunad kartoo ay sabab u tahay in aan sameynaa guddiga qaab daabacaadda. Waxaad ku bixin kartaa iyada oo loo marayo PayPal ama AliPay gaar Shiinaha iyo WeChatPay. Sida waqti bixinta, fadlan ka heli sheet hoose.
aagga Shipping waqti Delivery by express
Waqooyiga Ameerika 2 ~ 3days
Aasiya 2 ~ 3days
Waxaan raadineynaa GOTS barkin ah meditation shahaado, baad u leedahay?
Haa. barkin Our meditation maray shahaadada GOTS. Dhammaan alaabta aannu la sameeyey by qalab nontoxic. Maxaa yeelay, dhammaan macluumaadka shahaadooyinka fadlan ka heli sheet hoose.
macluumaad shahaado idman patent
our warshad GOTS, BSCI, ISO9000
Cuntooyinkan hula hoop CE, gaari, ROHS, Azofargestoffene, EN71,6P haa
derin acupressure CE, ROHS, EN957, gaari haa
taageero dib sixir CE haa
barkin meditation ROHS, EN71, GOTS
Sidee dheer waa markii wax soo saarka iyo markii maraakiibta amar kasta?
Waxaan ku updated line noo soo saarka si toos ah loogu talagalay hoop hula iyo derin acupressure oo u xuub koobaya mar wax soo saarka si ay u 15 maalmood, waayo, mid 40HQ weelka. Waayo, wax soo saarka kale waqti hogaanka saarka caadiga ah ku saabsan yahay 20 maalmood.
dekedda Destination waqti Delivery badda
Waqooyiga Ameerika 30 ~ 50days
Europe muddo 30
Aasiya 7 ~ 15days
Waa maxay dheer lacagtaada?
Our muddada lacagta caadiga ah waa T / T 30% sida deposit, 70% ka dhanka ah B nuqul L /.
adeeg kale ha ku siin?
Waxaan heysanaa koox sawir xirfad iyo dareen xoog leh photostudio weyn iyo qalab horumarsan oo ka caawisaa si ay u bixiyaan adeegyada taageerada sidii xal sare photo xayaysiinta, model sawir iyo video macaamiisha ah.
Nala soo xiriir ku saabsan ganacsi ama sheyga in uu si gaar ah loogu talagalay idiin! nala soo xiriir
NEH (Ningbo) warshadaha & Ganacsiga CO., LTD.
XAFIISKA: 1502, Ningshing Building, 666 Jiangnan RD, Degmada Yinzhou, Ningbo, Shiinaha
Warshad: No.13, Xinheng Yi RD, Warshadaha Zone Private, Degmada Jiangbei, Ningbo, Shiinaha
© Copyright - 2009-2020: Rights Reserved All.